SomaliTalk.com » Safiirka Somaliya ee Kenya oo casuumaad u sameeyey Safiirka cusub ee Dowladda Shiinaha
Safiirka Somaliya ee Kenya Ambassador Maxamed Cali Nur Ameriko ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Safiirka Cusub ee Dawladda Shiinaha u magacowday Somalia Iyo Kenya, Sabti October 2, 2010.
Mudane: Liu Guangyuan waxaa halkaas ku soo dhaweeyey Safiirka Somaliya Ambassador Maxamed Cali Nur Ameriko Iyo Ku Xigeenkiisa, Mohamed Cismaan Adan”Edson”.
Labada Safiir ayaa ka wada hadlay xidhiidhka dheer ee ay labada dal leeyihin iyo taageerada ay dadka iyo dawladda Shiinuhu siiso dawladda iyo dadka Somalia, iyadoo Safiirka Somalia Ee Kenya, Mudane Mohamed Cali Ameriko uu uga mahad celiyey xidhiidhkaas dheer iyo taageerada aan kala go’a lahayn ee ay dawladda Shiinuhu la garab taagan tahay dowladda iyo dadka Somaliyed.
Safiirka Somaliya ayaa ku ammaanay dawladda Shiinaha xidhiidhka ganacsi ee ay dalkeeda ka samaystaan ganacsatada Somaliyeed, iyo sidoo kale soo dhaweynta ay u fideyeen dadka Shiinuhu, waxana uu sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin ka dawlad ahaan taageerada bani’adinaimo ay siiyaan dadka Somaliyeed.
Safiirka Cusub Ee Shiinaha ee Somaliya Iyo Kenya,Ambassador Liu Guangyuan ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay taageeraan dawladda iyo dadka Somaliya iyadoo uu xusay inaanay dawladda Shiinuhu marnaba kala gaban doonin teegeerada ay taageerto Dadka iyo Dawladda Somaliyeed, waxana uu sheegay inay sii laba jibaari doonaan taageeradaas, iyadoo uu xusay in Somaliya ay kaga jirto taariikhda Shiinaha meel aad u culus.
Gebagabadii kulanka ayaa wuxuu ku soo dhammaaday jawi aad u degan oo farxadeed, waxaana ay labada dhinacba isla garteen in la sii laba jibaaro taageerada ay dawladda Shiinuhu siiso Somaliya.
1 Jawaab " Safiirka Somaliya ee Kenya oo casuumaad u sameeyey Safiirka cusub ee Dowladda Shiinaha "
Wednesday, October 6, 2010 at 3:58 am
Safiirka af-somaliga ku hadla ee ugandha u fadhiya kenya dhaha markaad ka hadlaysaan reerkaan soo shaqada tagay ee u maleeya in musaveni askartiisa lagu noqon karo safiir…
Kuwaan wajigooda inaad somalida hor keentaan maha…..